Decoora bu webusaiti nke Actualidad Blog. Anyị website raara nye ụwa nke ochicho mma, na ya anyị na-atụpụta echiche mbụ maka ụlọ gị, ogige, ọfịs ... ka anyị na-ekwu maka ọnọdụ na mmepe na ngalaba ahụ.
El Deoora ederede ndi otu Ọ bụ ndị na-akwado ụwa nke ịchọ mma bụ ndị nwere obi ụtọ ịkọ ahụmịhe ha na nka ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso na ya, egbula oge dere anyị site n'ụdị a.
Agbanyeghi na emegorom ihe omumu m rue ulo oru mmeputa na injinia, enwere otutu ihe ndi ozo nke juputara m dika egwu, ime ime ma obu isi nri. Decoora na-enye m ohere ịkekọrịta ndụmọdụ, echiche na Mee N'onwe Gị gbasara ịchọ mma n'aka gị niile.
Kemgbe m dị obere, elere m anya na mma ụlọ ọ bụla. Nke nta nke nta, ụwa nke imepụta ihe na-aga n'ihu na-adọrọ mmasị m. Enwere m mmasị igosipụta ihe okike m na usoro ọgụgụ isi nke mere na ụlọ m zuru oke mgbe niile ... ma nyere ndị ọzọ aka inweta ya!
Anọ m na-ahụ mgbe niile na ihe m bụ ịbụ onye nkuzi. N'ihi ya, enwere m ogo mmụta na English Philology. Ma na mgbakwunye na ọrụ, otu n'ime agụụ m bụ ụwa nke ịchọ mma, usoro na ihe eji achọ mma. Ebe ihe okike aghaghi ibu mgbe obula ma ya bu ihe ima aka nke m huru n'anya.
Site na nzere na Mgbasa Ozi, ihe kachasị amasị m bụ ide. Na mgbakwunye, enwere m mmasị na ihe niile na-atọ ụtọ ma mara mma, ọ bụ ya mere m ji bụrụ onye na-achọ mma. M hụrụ ihe mgbe ochie na Nordic n'anya, mmanya anaghị egbu egbu na ụdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Achọrọ m mmụọ nsọ ma nye echiche dị mma.
Abụ m onye ọrụ ugbu a na onye na-ebubata ngwa ahịa dị elu, ọkachasị Nordic, mgbe afọ iri nke ahụmịhe na mpaghara ụlọ ahịa, nke mbụ dịka onye njikwa ụlọ ahịa n'ọtụtụ imewe na imepụta ihe ngosi na Madrid, ma mesịa bụrụ onye mmebe ime na ịkọwapụta ihe. ije ije. Achọpụtawo m mgbe niile na idiosyncrasies of Scandinavian design: Essential, functional, timeless, colors and free of artifice.
Aha ya bụ Silvia Serret
Gụsịrị akwụkwọ na Hispanic Philology, na-anụ ọkụ n'obi maka akwụkwọ ozi na ihe niile mara mma. Egwuregwu kachasị amasị m: ịgwa ụwa mmetụta m banyere ihe niile metụtara ụwa nke ime mma na imepụta ihe. Enwere m olileanya na ị ga-enwe obi ụtọ na ọdịnaya m.